Fomba 10 ho tsara loatra dia hifarana ratsy ho anao - Fifandraisana
Fomba 10 ho tsara loatra dia hifarana ratsy ho anao
Ity tontolo ity dia mety ho toerana maizina izay sarotra hita ny hatsarana sy ny hatsaram-panahy…
… Nefa, betsaka ny olona mahafinaritra any izay manandrana mandray an'io haizina io amin'ny famelana ny fahazavan'izy ireo hamiratra.
Faniriana sy kalitao mendri-piderana amin'ny olona rehetra izany. Mampalahelo fa misy fijaliana, tsy fitoviana ary fitiavan-tena goavana eto amin'izao tontolo izao. Matetika ny olona dia mijery ny azy fa tsy ny mpiara-belona aminy.
Ny olona tsara fanahy sy tsara fanahy izay tsy manana fetra azo antoka hialokaloka ao aoriana dia ho ratsy toetra kokoa.
Tsy midika izany fa tokony hatsahatra ny hatsaran-tarehinao raha tsara izany, na tsy tokony ho tsara ianao amin'ny voalohany, fotsiny ny tokony hahalalanao ny fotoana hanidiana ny varavarana amin'ny toe-javatra ratsy mety hanimba anao.
Ny maha-olombelona dia tsy maintsy jerena amin'ny enigma izay - tsara fanahy sy masiaka, mangoraka sy mangatsiaka, tia olona ary tia tena.
Ny fahaiza-miaina, mivelona ary miaina amin'ny fomba mahasalama dia hita amin'ny fandanjana ireo lafin-toetran'ny olombelona ireo.
Ny fahafinaretana loatra dia mety hanimba ny fiainanao, fa ny fahatakarana ireo fanamby miaraka aminy dia mety hisakana anao tsy ho voadona raha manandrana mametraka zavatra tsara eto amin'izao tontolo izao ianao.
Ka… inona no tokony ho fantatrao?
1. Hiezaka hanararaotra anao ny olona.
Ny olona tsara fanahy dia mety ho fofonaina madio amin'ny toe-javatra mety. Amin'ny toe-javatra tsy mety anefa dia mety hisarika ny sain-dratsy izy ireo.
Ny Nice dia mety hanakantsakana ny tontolo mifaninana toa ny toeram-piasana sy ny orinasa, indrindra raha diso ny fiheveranao fa ilay olona mifanena aminao dia hitondra anao amin'ny hatsarana na haja mitovy aminy.
fanontaniana izay hahatonga anao hieritreritra
Ny olona mitady sisiny dia matetika hone amin'ny olona mahafinaritra, satria ny mahafinaritra matetika dia mifanojo amin'ny malefaka, indrindra raha any amin'ny tontolo iray ianao izay tsy mifanaraka amin'ny fitondran-tena mahazatra ao amin'izany tontolo izany ny tsara.
Azonao atao ny misoroka izany amin'ny fahalalana ny tontolo iainanao sy ny fiantohana fa mafy ny fari-taninao. Tsy maninona ny fahalalam-pomba, fahalalam-pomba ary ny matihanina raha mbola azonao antoka fa voaro sy azo antoka ny tombontsoanao.
2. Mety tsy hanaja anao na ny fari-taninao ny olona.
Hizaha toetra ny fari-taninao matetika ny olona, ​​manosika hijery hoe hatraiza no azon'izy ireo ialana alohan'ny hanapahanao hevitra amin'ny farany mba hanosika hiverina hisorohana ny fitsaboana azy amin'ny fomba tsy ekena.
Matetika, izy ireo avy eo dia hiezaka ny hamerina ny fitondran-tenany amin'ny filazany aminao fa diso fandray fotsiny ianao, tsy ny fomba nanolorany azy io no nahatonga azy ireo hilaza, na hoe vazivazy fotsiny izy ireo.
Tetikasa fanodikodinam-bola mahazatra io izay milaza aminao betsaka momba ilay olona ifaneraseranao.
Ny tena tsy fahazoan-kevitra amin'ny ankapobeny dia ahitana fifonana sy fikasana hanarina ilay fihetsika.
inona no holazaina amin'ny namanao aorian'ny fisarahana
Ireo olona mamerina azy io dia mazàna mitady fahalemena ao amin'ny fari-taninao fotsiny, izay ho hitan'izy ireo na ho ela na ho haingana, raha avelanao hanohy hanodinkodina.
Ireo olona ireo dia tokony hotehirizina amin'ny halavirana azo antoka raha tsy esorina tanteraka amin'ny fiainanao.
3. Tsy hiezaka ny olona hanome izay ilainao.
Olona maro no tia tena, tia tena ary entin'ny fihetsem-po sy ny fomba fijerin'izao tontolo izao.
Mety tsy dia hangoraka na hangoraka ny filan'ny hafa izy ireo. Mety tsy dia mahalala ny fihetsiny izy ireo na mety tsy miraharaha azy ireo.
Amin'ny tranga maro dia ho hitanao fa ny olona tsy miraharaha dia olona izay nanao taloha nefa nanararaotra ny hatsarany sy ny hatsaram-panahiny.
Mila izany ny olona mahafinaritra mahasahy . Tokony hampita amin'ireo olona manodidina azy ireo izay ilainy sy antenainy.
Olona mahafinaritra maro no tsy te hoheverina ho toy ny ratsy toetra, tsy mahalala fomba, na tsy tsara fanahy , noho izany dia eken'izy ireo ny fitondrana azy amin'ny fomba ratsy na tsy misy fiheverana mba tsy hiteraka korontana.
Indraindray ianao dia tsy maintsy miteraka korontana raha toa ka tsy entina am-panajana izany.
4. Mety hadinonao ny mitondra tena tsara aminao.
Tsy ny olona tsara rehetra eto amin'izao tontolo izao no tsara satria izany no izy. Misy ireo izay mandany hery be dia be amin'ny fanaovana ny tsara amin'ny olon-kafa ho toy ny fitsaboana tena mba tsy hiatrika ny olany manokana.
Mety hanary ny fotoanany sy ny heriny be loatra amin'ny hatsaram-panahy nomeny ny hafa izy ireo ka mety tsy hiatrika na hikarakara izay ilainy manokana.
Misavoritaka sy mikorontana ny fiainana. Handalo toe-javatra tsara sy ratsy ny olona maro.
Mora dia mora ny manafotra ny fihenan-tena sy ny olan'ny olon-kafa ary sintonina miaraka amin'izy ireo.
Ny zavatra manaraka fantatrao dia azonao atao ny mijery ny manodidina ary mahita fa efa lasa ny taona nefa tsy mandroso misy dikany amin'ny olanao izay hahafahanao mahita fiadanan-tsaina sy fahasambarana.
Miezaha ho tsara amin'izao tontolo izao, raha izany no tianao hapetraka ao aminy, fa aza adino ny mitondra ny tenanao tahaka ny itondranao ny hafa ihany koa.
5. Ny olona dia hijery anao amin'ny fisalasalana sy ny tsy fahatokisana.
Tsy mahazatra ny olona raiso ho toy ny fihetsika mampiahiahy ny hatsaram-po tsy mendrika .
Ity tontolo ity dia mety ho toerana tsy misy dikany izay ahafahan'ny hatsaran-tarehy tsy ampoizina manaparitaka ny fahatsapana loza ateraky ny olona iray izay tsy manantena azy… indrindra raha tsy fantany izay fikasanao.
Mety hieritreritra ihany koa ny olona fa misy zavatra tsy mety ao aminao, ny fahafahanao manararaotra azy ireo fotsiny na ny manafina ny antony manosika anao.
Tsy midika izany fa tokony hatsahatra ny hatsaranao!
Tandremo fa mety hiaina an'ity karazana valiny ity ianao ary ho vonona ny hiatrika izany mialoha ny fotoana.
Lazao amin'ny olona iray hafa ny fikasanao, raha misy ianao. Ary raha tsy manao izany ianao, Mahareta miaraka amin'ilay olona mba hahazoan'izy ireo mahatsapa anao mivoaka sy tonga amin'ny fiononany.
Mety maharitra fotoana fohy ilay izy mandra-pahitan'ny olona iray fa tena misy ianao amin'ny fihetsikao sy ny fihetsikao.
Ny antony, ny toetra, ary ny karazana fihetsika manimba tena
6. Azonao atao ny mamily ny fomba fijerinao an'izao tontolo izao.
Ny fomba fijery miorina amin'ny tontolo iainantsika dia ilaina mba hahazoana antoka fa mitazona toe-tsaina salama sy voalanjalanja isika.
Ny tsara indrindra, amin'ny maha-olona mahafinaritra anao, dia ho hitanao fa voahodidin'ny olona tsara sy tsara ianao rehefa manangana sy mampihatra tsara ny fari-taninao. Ireo mpiremby sy mpampiasa dia mazàna manalavitra ireo olona tsy mamela ny tenany hamboarina.
Na izany aza, mety ho mora ny tsy mahita ny ambin'izao tontolo izao raha lasa mihidy loatra ny faribolanao.
Azontsika atao ny miditra amin'ny fahatsapana fandriam-pahalemana sy fahafaham-po diso, manolotra zavatra be loatra amin'ny olona mety tsy hanaja na hamerina ilay hatsarana mitovy, ary hahita fa maratra ao anatin'izany.
Tsara ny manodidina anao amin'ny olona tsara fanahy sy mahafinaritra, saingy tsy dia tsara loatra ny manadino ny toetra sarotra amin'ny zanak'olombelona sy ny sisa amin'ny tany.
Tsy hoe izao tontolo izao dia toerana mahatsiravina na tsy misy toerana ho an'ny fahatsarana. Mihoatra noho izany ny ankamaroan'ny olona dia tena mijery ny tombotsoany na mitahiry tena.
Ny olona tsara fanahy dia mila manao izany ho an'ny tenany amin'ny ambaratonga sasany koa.
7. Mety manomboka tezitra amin'ny olona tianao ianao.
Ny lolom-po dia fahatsapana misy poizina izay mety hanimba tsikelikely ny fototry ny finamanana sy ny fahatokisana. Matetika izy io dia manomboka amin'ny fifanakalozana tsy mifandanja eo amin'ireo antoko voakasik'izany.
Amin'ny tranga maha-tsara, dia mety hanomboka hitombo izy io raha mando tena be loatra amin'ny olon-kafa ilay olona tsara fanahy nefa tsy misy valiny sahaza azy.
inona no dikan'izany rehefa mifankatia amin'ny olona iray ianao
Miankina amin'ny toe-javatra iray koa izany. Angamba ianao tsy naman'ilay olona. Angamba izy ireo dia olona izay manana fotoan-tsarotra izay ezahanao hampitraka sy hanohanana.
Tsy tena antenainao ny hatsaran-tarehy na hatsaram-panahy amin'izy ireo amin'izao fotoana izao satria sahirana izy ireo ary manandrana mitazona ny lohany ambonin'ny rano.
Fa inona no mitranga rehefa mamindra ny sainy any amin'ny toerana tsara kokoa izy ireo amin'ny farany ary manapa-kevitra ny tsy hamaly rehefa mila fanampiana ny olona tsara?
Avy eo manana lolom-po ianao.
ny fomba ho fitiavana ao anaty fiarahana
Hafa tanteraka ny finamanana sy ny fifandraisana. Heverina fa mifamaly sy mifanasoa amin'ny lafiny iray izy ireo.
Tsy afaka mandatsaka tsy tapaka ny hatsarana sy ny hatsaram-panahy amin'ny kapoaky ny hafa ianao raha tsy mampihena ny tenanao amin'ny farany. Io fizotry ny fihenan-tena io dia haingana kokoa raha sakaiza ilay olona na olon-dehibe hafa izay tsy mamerina ao aminao.
Hiorina ny lolompo ary hirodana izany fifandraisana izany.
8. Mety ho hitanao fa miala tsiny noho ny zavatra tsy nataonao.
Ny olona tsara fanahy dia matetika tsy tia mahita olon-kafa sosotra na mahasosotra ny olon-kafa. Mety hanjary olana ho an'ny olona mahafinaritra izany raha manomboka mitondra olana sy fihetseham-po izay tsy azy ireo izy ireo.
Zavatra iray ny hoe eo ho an'ny olona sahirana, manolotra fanampiana sy hatsaram-panahy amin'ny fotoana sarotra. Ny olona tsara fanahy dia mila mailo amin'ny olona hafa manandrana mametraka ny andraikitra ara-pihetseham-po aminy.
Ny olona tsara fanahy dia mila mailo amin'ny andian-teny hoe 'Miala tsiny aho' mba hahazoana antoka fa misy izany tsy miala tsiny ho an'ny zavatra tsy azy ireo ary manalefaka ny fihetsem-po izay tokony hiasan'ny olona iray hafa.
Tsy maninona ny ekeo ny andraikitrao amin'ny safidinao sy ny zavatra ataonao , samy tsara sy ratsy, fa ny olona tsara fanahy dia tokony hitandrina mba tsy handray andraikitra ara-pihetseham-po izay tsy azy ireo.
Amin'ny lafiny rehetra, miala tsiny rehefa nanao zavatra tsy mety na nanenina ianao , fa aza miala tsiny amin'ny zavatra tsy anao na andraikitrao.
9. Mety ho hitanao fa mavesatra andraikitra fanampiny ianao.
Ny maha-tsara loatra anao dia fomba haingana hanotofana andraikitra tsy azo fehezina.
Ary amin'ny andraikitra azo tsapain-tanana dia miresaka momba ireo hetsika mandeha amin'ny fiainanao izahay, manolo-tena an-tsitrapo amin'ny hetsika nefa tsy misy olona manatona anao satria heveriny fa hanaiky izany ianao, na hanaiky mihoatra ny anjaranao.
Ny olona tsara sy mangoraka loatra dia azo hararaotin'ny hafa izay tsy miraharaha ny fihetseham-pony, manaja ny fotoanany, na ny andraikiny.
“Tsia.” dia fehezanteny feno izay tsy maintsy ianaran'ny olona tsara.
Indraindray dia tsara na ilaina ny manome fanamarinana fanampiny, indrindra raha manandrana mitady làlana afovoany miaraka amin'ireo olona akaiky anao ianao.
Na izany aza, tsy takiana ireo olona tsy dia akaiky anao amin'ny toerana misy ny marimaritra iraisana, na ireo izay manararaotra anao dia tsy tokony hahazo mihoatra ny 'tsia' mihitsy.
Ny fanamarinana dia manome olona manipulative mety ho eny an-dalambe hametraka ny fisalasalany-tena ary hanimba ny 'tsia' anao.
10. Manintona ny olona mahasarika, manipulator ary mpampiasa ianao.
Ny olona mahafinaritra dia manintona ny mpifoka rongony, manipulator ary mpampiasa.
Satria ny mpivady mahafinaritra miaraka amin'ny naive dia ampy matetika ka filokana azo antoka. Ny olona izay sady tsara no tsy manam-pahalalana dia matetika maniry ny hahita ny tsara indrindra amin'ny olon-kafa, na dia ny olona izay tsy ananan'ny akaiky azy indrindra manaloka ny ratsy aza.
Ireo mpiremby dia mitady olona mahafinaritra satria matetika izy ireo no mora manosotra, manodinkodina, tsy mametraka fanontaniana mety, tsy mametraka fetra ary mampihatra azy ireo, ary manana fotoana sarotra hijerena ireo hafa mijaly.
Inona no ifandraisan'ny fijaliana amin'izany? Teknika manipulative mahazatra ampiasaina dia ny fandokoana ny tena ho olona iharan'ity tontolo masiaka ity.
'Ny lehibeny no nanome izany ho ahy!'
“Adala daholo ireo namako taloha!”
“Manohitra ahy ny rehetra ary tsy misy manohana ahy!”
Ny manipulator dia mazàna mandao ny andraikitr'izy ireo amin'ireo zavatra rehetra ireo, ny fihetsiny amin'ny hafa, na mampiseho izy ireo ary tena manao ny asany, raha toa ka manolotra karazana fanampiana na fanampiana amin'ny namany izy ireo.
Ny olona tsotra dia mahatsapa alahelo ho an'io olona io raha tsy misy fanaraha-maso, tsy manontany tena ny amin'ny antony manosika na ny tsy fitovizany. Io dia mametraka azy ireo amin'ny toerana azo ovainaina.
Ny fomba tsotra indrindra hanoherana an'io dia ny fitandremana, ny fihainoana ny tsy fitovizan-kevitra ary ny fanontanina azy ireo. Azonao atao ny mangoraka amin'ny tantaran'ny olon-kafa, fa aza avela hanaloka ny fitsaranao ny fihetsem-ponao.
Ny fahasoavana dia kalitao ilain'ity tontolo ity, saingy mety hiteraka olana tsy ilaina amin'ny fiainanao izany.
Ny fiainana dia momba ny fandanjana. Indraindray ny mahafinaritra dia tsy mety, indrindra ny amin'ny fitehirizana ny fahamasinan'ny habakao manokana, fiadanan-tsaina ary fahasambarana.
Azontsika rehetra atao ny miezaka ny ho tsara fanahy ary hametraka an'io hatsaram-panahy io amin'izao tontolo izao, saingy tsy maintsy ampanjanjalinintsika ihany koa izany amin'ny fiantohana fa tsy voatsabo tsara isika mandritra izany.
inona no hatao rehefa mandainga aminao ny sakaizanao
ny fomba tsy mandray olona ho mailo
inona no tsy ny narcissist indrindra
manome toerana ho an'ny lehilahy amin'ny fifandraisana
ny fomba tsy hiankin-doha intsony
ahoana no fomba ilazana amin'ny olona tianao tokoa
maninona ny bandy mafana sy mangatsiaka